ISIS oo sheegatay dilka labo askari oo katirsanaa ciidamada booliiska Puntland oo ka dhacay Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandISIS oo sheegatay dilka labo askari oo katirsanaa ciidamada booliiska Puntland oo ka dhacay Boosaaso
December 9, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Ciidamo booliis ah oo ku sugan xarunta qeybta gobolka Bari. [Sawir Hore]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Maleeshiyada ISIS ayaa sheegatay dilka labo askari oo katirsanaa ciidamada booliiska Puntland oo ka dhacay magaaada Boosaaso, sida lagu daabacay wakaalada wararka ISIS ee Acmaaq maanta oo Isniin ah.
Sheegashadeeda ayaa timid kadib markii taliyaha ciidanka booliiska qeybta gobolka Bari Xuseen Cali Maxamuud uu sheegay in labo katirsan ciidanka booliiska ay toogteen dablay aan haybtooda la aqoon gudaha gudaha Boosaaso fiidnimadii Axada.
ISIS oo ah koox yar oo sanadkii 2015 bilowday kacdoonkeeda gobolka, ayaa weeraro badan oo ay la beegsatay masuuliyiinta dowladda, ciidamada, iyo dad shacab ah ka geysatay gudaha magaalada Boosaaso, oo ah xarunta ganacsiga Puntland.
Kooxdan oo uu hoggaamiyo Cabdulqaadir Muumin oo horey uga tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ku dhuumanaysa deegaanada miyiga ah ee gobolka Bari.
Sanadkan 2019, Mareykanka ayaa duqeymo ku dilay ku dhawaad 30 dagaalyahan oo katirsanaa ISIS oo uu ku jiray Cabdixakiin Dhuqub, oo ahaa ku xigeenka taliska ISIS ee Soomaaliya.
London-(Puntland Mirror) Waqooyiga Kuuriya ayaa hawada u riday gantaal rido dheer maanta oo Axad ah. Gantaalka ay riday Waqooyiga Kuuriya ayaa dul maray dhanka bariga ku aadan Badda Japan oo qiyaas ahaan u jirta 500km, [...]